कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक हाजिर गरेर भाग्छन कहाँ ? « Kathmandu Television HD
कृषि अनुसन्धान परिषद्का वैज्ञानिक हाजिर गरेर भाग्छन कहाँ ?
काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कार्यरत कृषि वैज्ञानिकहरु हाजिर गरेर भाग्ने गरेको खुल्न आएको छ । हाजिर गरेर कन्सल्टेन्सी धाउन थालिरहेको भेटिएको हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि तथा नयाँ जातका प्रजाति उन्मोचन गर्दै किसानसम्म पु¥याउने पर्ने निकायका रुपमा राजनीति बाहेक हुन छाडेको छ ।
नार्कको केन्द्रीय कार्यालयदेखि जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुसम्म समेत राजनीति गर्ने थलोका रुपमा विकसित भएको छ । जसले नार्कको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जन थालेको छ । हुन त कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनालले नार्कको औचित्य नभएको विगतमा नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
नार्कका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा औचित्य नरहेको भनिरहनुको कारण भने कर्मचारीतन्त्रमा भएको राजनीतिकरण र हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रबृद्धि हावी हुँदै गएकाले हो ।
हुन पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क मा कार्यालय समयमा छड्के गर्ने हो भने कुनै न कुनै बहानामा कर्मचारी बाहिर गएका देखिन्छन् । तर ती बाहिर गएका अधिकांश कर्मचारी मध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारी अन्यत्र कन्सल्टेन्टका रुपमा जागिर खाईरहेको भेटिन्छन् ।